နိုင်ငံရေးကသာ လောကကြီးကို ကိုင်လှုပ်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် နိုင်ငံရေးဝင်လုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်လောင်း ဆူဂါ ပြောကြား – Shwe Ba
ဂျပန် ဝန်ကြီး ချုပ် အသစ် ဖြစ်လာ မည့် ဆူဂါ ဆို တာ ဘယ်လို လူမျိုးလဲ? ဂျပန်၏ အာဏာ ရ ပါတီ အကြီး အကဲ အဖြစ် လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ တွင်းမှာ မဲအပြတ် အသတ် (၅၄၄-၃၇၇) နှင့် အနိုင် ရရှိခဲ့ပြီး နောက် ဝန်ကြီးချုပ် အဖြစ် တာဝန် ယူတော့မည့် ပုဂ္ဂိုလ် သည်ကား မစ္စတာ ယိုရှီဟိုင်းဒီ ဆူဂါ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဆူဂါ က ရွေးကောက် ပွဲ ခေါ်ဖို့ မရည်ရွယ် ပဲ ဂျပန် တို့ လက် ရှိ ရင်ဆိုင်နေ ရသည့် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါ ကြီး နှင့် စီးပွား ရေး ကျ ဆင်းနေမှု များကို ကိုင်တွယ် သွားမယ်လို့ ဆိုပါ တယ်။ ဆူဂါ သည် နိုင်ငံခြား ရေး မှာ အတွေ့အကြုံ မရှိသူ ဖြစ်ပြီး ယခု အခါ နိုဝင်ဘာ အမေရိကန် သမ္မတ ရွေးကောက် ပွဲ နဲ့ တရုတ် ရဲ့ ဦးထောင် လာနေမှု များကို ကိုင်တွယ်ရ တော့မှာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ်။ယခင် က သူ့လို တစ်ပြေးခဲ့ ကြတဲ့ ဘဏ္ဍာ ရေး ဝန်ကြီး တာရိုအာဆို နှင့် ကာကွယ် ရေး ဝန်ကြီး တာရို ကိုနို တို့ ကတော့ ရွေးကောက် ပွဲ အ သစ် ခေါ်ယူ ဖို့ အရိပ် အမြွက် ပြောခဲ့ ကြပြီး ဖြစ်ပါ တယ်။ လောလောဆယ်မှာ ဂျပန် အစိုးရအဖွဲ့ဟာ လူထု ထောက်ခံမှု တွေ ရရှိနေတာလည်း ဖြစ် ပါတယ်။ ဒီအ တွက် အတိုက် အခံ ပါတီတွေ အား လုံး နိုင်ငံ ရေး အုပ်စု ကြီး တခု အဖြစ် ပူးပေါင်းလိုက် ကြပါ တယ် ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မှာ ကျင်းပ ရန် ရှိတဲ့ ပါလီမန် အထူး အစည်း အဝေးမှာ ဆူဂါကို ဝန်ကြီးချုပ် အဖြစ် (၂၀၂၁) စက်တင်ဘာ အထိ ထမ်းဆောင် နိုင်ရန် တင်မြှောက် ဖို့ ရှိနေ ပါတယ်။ ဆူဂါက သူ၏ အစိုးရ အဖွဲ့အတွင်း ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး သမားများ ကိုသာ ရွေးချယ် တာဝန်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး အာဏာ ရ ပါတီ အတွင်းက အုပ်စုများ ကို မျက်နှာချို သွေးနေမှာ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
စီးပွား ရေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စည်းမျဉ်းများ ဖြေလျော့ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး ဝန်ကြီးဌာနများ အတွင်း ဂိုဏ်းဂဏ ဖွဲ့နေမှုများ၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ကာကွယ် မှုများ၊ အရင် က လုပ်ခဲ့ဖူးသည်များကိုပဲ မျက်စိမှိတ်ပြီး လိုက်လုပ်နေမှုများကို အဆုံးသတ် ပေးတော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ် ။အစိုးရ လုပ်ငန်း များ အားလုံးကို ဒီဂျစ်တယ် ပြောင်းလဲပြီး ပြည်သူများ အနေနှင့် တရက် နှစ်ဆယ့်လေးနာရီ၊ တပတ် ခုနှစ်ရက် ဆက်သွယ်လုပ် ကိုင်နိုင်အောင် ဖန်တီးသွားမယ်လို့ ကြုံးဝါးခဲ့ပါတယ်။
ဆူဂါ သည် အသက် (၇၁)နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး အောက် လွှတ်တော် အမတ်အဖြစ် ရှစ်ကြိမ်မြောက် အရွေးခံထားရပြီးသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာ ရ ပါတီရဲ့ ပေါ်လစီရေးရာ ကိုင်တွယ်သူ အဖြစ် လူသိများသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရ လစ်ဘရယ် ပါတီအတွင်း မည်သည့် အုပ်စုမှာမှ မပါဝင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာ ရေး၊ အလုပ်သမားရေး နဲ့ လူမှုဖူ လုံရေး ဝန်ကြီးဌာနတွေကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသွားရန်၊ မိုဘိုင်း ဖုန်း ဘီလ်များကို လျော့ချနိုင်ရန် နှင့် ဒေသ အလိုက် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဘဏ်တွေကို တစည်းတလုံးတည်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်သွားရန် စိတ်အားထက်သန်လျှက် ရှိတယ်လို့ သိရပါ တယ်။
ဆူဂါ သည် အစိုးရ အဖွဲ့၏ အတွင်းဝန်ချုပ်လည်း ဖြစ်ပြီး ပြည်ထဲရေး နဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးလည်း ဖြစ်တာကြောင့် သူလုပ်ခဲ့သမျှ မှတ်တမ်း တွေ အရ ဆိုရင် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး သမား စစ်စစ်ကြီး ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ်။လောလောဆယ် ဆူဂါရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး ပေါ်လစီ ကို အတိ အကျ မသိရသေးပေမယ့် ယခင်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇို အာဘေး ရဲ့ မူအတိုင်း ဆက်သွားမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဆူဂါ သည် မနက် မိုးလင်း သည်နှင့် ထိုင်ထ အကြိမ်တရာ လုပ်ပြီး နေ့စဉ်ထုတ် အထင်ကရ သတင်းစာကြီးများကို ဖတ်ရှုလေ့ ရှိပါတယ်။ ပြီးတာ နဲ့ အပြင် ထွက်ပြီး မိုးရွာရွာ နေပူပူ မိနစ် လေးဆယ်ခန့် လမ်းလျှောက်တတ်ပါတယ်။
သူ၏ အိမ် မှာ တခါ မှ ညအိပ်ည နေ မနေခဲ့ဖူး လို့ သိရပါတယ်။ အရက်သေစာ သောက်သုံးခြင်း မရှိတဲ့ ဆူဂါအဖို့ တနေကုန် ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်ပြီး ပါလီ မန် အမတ်တွေ အတွက် ပေးထားတဲ့ အဆောင်ရှိ သူ့အခန်းမှာ နောက်ထပ် အကြိမ်တရာ ထိုင်ထ လုပ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း အ ချို အရမ်းကြိုက်တဲ့လူ ဖြစ်လို့ ကိုယ်အလေးချိန် ၇၇ ကီလို အထိ ရှိလာတာကြောင့် ဆရာဝန်တွေရဲ့ အကြံပေးချက်အရ လုပ်တာလို့ ဆိုပါ တယ် ။စ နေ တနင်္ဂနွေ မှာ သာမန် ပြည်သူတွေနဲ့ တွေ့နိုင်သမျှ တွေ့ပြီး သူတို့ ပြောတဲ့ စကားတွေ နားထောင် ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဂျပန်မှာ အခု ခေတ် စားလာတဲ့ ရထား ဘူတာရုံ ရှေ့မှာ ပါလီမန် အမတ်တွေ လူထုကို မိန့်ခွန်းပြောတဲ့ Soapbox speech ကို ဆူဂါက စတင် တီထွင်ပေးခဲ့တာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ်။
ဆူဂါ က အဲ့ဒီ အချိန် နိုင်ငံ ရေး မှာ လက်သစ်က လေးသာ ဖြစ်သော်လည်း မေးခွန်းစာရွက် ကလေးတွေ ကိုင်ပြီး လူတွေကို စိတ်ဝင်စားမယ့် အကြောင်း အရာတွေ ကို စာရွက်ပေါ်မှာ ဝိုင်းခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ခေတ်တခေတ် စတင် ထူထောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။မိဘ များ သည် စတော်ဘယ်ရီ စိုက်ပျိုးရေး ကို ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်ကိုင်နေကြရသူများ ဖြစ်ပြီး အာကီတာ ဆိုတဲ့ ကျေးလက် စီရင်စု မှာ မွေးဖွားခဲ့သူ ဖြစ်ပါ တယ်။ အထက်တန်းကျောင်းကို အောင်မြင်ပြီးနောက် တိုးတက်မှုကို ရှာဖို့ တိုကျိုကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
စက်ရုံ သေးသေး တစ်ခု မှာ နှစ်နှစ် လောက် ဝင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘဝနာလာတဲ့ ဆူဂါသည် ဟိုဆေး တက္ကသိုလ် ကို ဆက်လက်တက်ခဲ့ပြီး ကျောင်းစရိတ် အတွက် နေ့ဖက် ညဖက်တွေ မှာ ရသမျှ အချိန်လေးကို အချိန်ပိုင်း အလုပ်တွေ ဝင်လုပ်ပြီး ကျောင်းစရိတ် ရှာခဲ့ရသူလည်း ဖြစ်ပါ တယ်။တက္က သိုလ် က ကျောင်းပြီး တာနဲ့ ဇာတိရပ်ရွာကို ပြန်လာပြီး ကုမ္ပဏီတခု မှ ဝင်လုပ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ထိုသို့ လုပ်နေရင်းက လောကကြီးကို လှုပ်သွား အောင် လုပ်နိုင်တာ နိုင်ငံရေး ပဲ ဆိုပြီး နိုင်ငံရေး လောကထဲ ဝင်ဖို့ စဉ်းစားလာပါတယ်။
နိုင်ငံ ရေး လောက ထဲ ဝင်ဖို့ ကျောထောက်နောက်ခံ ကလည်း မရှိတာမို့ အဆက်အသွယ် ရလို ရငြား သူရဲ့ တက္ကသိုလ် ရှိရာ ပြန်လာပြီး မိမိနဲ့ သင့်တော် မယ့် အလုပ်မျိုး အကြံပေးတတ်တဲ့ career center ကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ စင်တာ မှာ သူအသိချင်ဆုံး မေးခွန်းကိုပဲ စမေးလိုက် ပါတယ်။“ဒီကျောင်း က ဘွဲ့ရပြီး နိုင်ငံ ရေး သမား ဖြစ်နေ တဲ့ လူ တယောက်ယောက်နဲ့ ကျွန်တော်ကို မိတ်ဆက်ပေးလို့ ရမလား”စင်တာ က ဘွဲ့ရ ကျောင်းသား ဟောင်းများ အသင်းရဲ့ အတွင်းရေးမှူး နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဆူဂါရဲ့ လိုလားချက် ပြည့်ဝ သွားခဲ့ပါ တယ်။ အသက် ၂၆ နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ ဆူဂါသည် အောက်လွှတ်တော် အမတ် ဟီကိုဆာဘူရို အိုကိုနိုဂျီ ရဲ့ ရုံးမှာ အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် အလုပ်လုပ် ခွင့် ရသွား ခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီအချိန် ဟာ ၁၉၇၅ ခုနှစ် ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် (၃၈)နှစ် မှာ ယိုကို ဟာမား မြူနီစပယ် လူကြီး အဖြစ် ဝင်ရောက် အရွေးခံ ခဲ့ပါတယ်။ ကျေးတောသား ဖြစ်တဲ့ ဆူဂါ အဖို့ အောင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့် ချက် နည်းနေပေမယ့် ယိုကိုဟာမားမှာ သူလို တောက တက်ပြီး လာအလုပ်လုပ် နေတဲ့ လူတွေရဲ့ ဝိုင်းဝန်းထောက်ခံမှုနဲ့ အရွေးခံခဲ့ ရပါ တယ်။ယိုကို ဟာမား မြူနီစ ပယ် အမတ်အဖြစ် လေးနှစ်သက်တမ်း နှစ်ကြိမ် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ ၁၉၉၈ မှာ တိုကျိုရှိ နာဂါတာချို ခရိုင်ကနေ လစ် ဘရယ် ဒီမိုကရက် ပါတီ ကိုယ်စားပြုပြီး အောက်လွှတ်တော် အမတ် အဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာ မှာ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။လက် ရှိ အစိုး ရ အဖွဲ့ အတွင်းဝန်ချုပ် ရာထူးကို ၂၀၁၂ ကတည်းက တာဝန်ယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂပြနျ ဝနျကွီး ခြုပျ အသဈ ဖွဈလာ မညျ့ ဆူဂါ ဆို တာ ဘယျလို လူမြိုးလဲ? ဂပြနျ၏ အာဏာ ရ ပါတီ အကွီး အကဲ အဖွဈျ လဈဘရယျ ဒီမိုကရကျတဈျ ပါတီ တှငျးမှာ မဲအပွတျ အသတျ (၅၄၄-၃၇၇) နှငျ့ အနိုငျ ရရှိခဲ့ပွီး နောကျ ဝနျကွီးခြုပျ အဖွဈ တာဝနျ ယူတော့မညျ့ ပုဂ်ဂိုလျ သညျကား မစ်စတာ ယိုရှီဟိုငျးဒီ ဆူဂါ ဖွဈျ ပါ တယျ။
ဆူဂါ က ရှေးကောကျ ပှဲ ချေါဖို့ မရညျရှယျ ပဲ ဂပြနျ တို့ လကျ ရှိ ရငျဆိုငျနေ ရသညျ့ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈျ ကပျရောဂါ ကွီး နှငျ့ စီးပှား ရေး ကြ ဆငျးနမှေု မြားကို ကိုငျတှယျ သှားမယျလို့ ဆိုပါ တယျ။ ဆူဂါ သညျ နိုငျငံခွား ရေး မှာ အတှအေ့ကွုံ မရှိသူ ဖွဈပွီး ယခု အခါ နိုဝငျဘာ အမရေိကနျ သမ်မတ ရှေးကောကျ ပှဲ နဲ့ တရုတျ ရဲ့ ဦးထောငျ လာနမှေု မြားကို ကိုငျတှယျရ တော့မှာ လညျး ဖွဈျပါ တယျ။ယခငျ က သူ့လို တဈပွေးခဲ့ ကွတဲ့ ဘဏ်ဍာ ရေး ဝနျကွီး တာရိုအာဆို နှငျ့ ကာကှယျ ရေး ဝနျကွီး တာရို ကိုနို တို့ ကတော့ ရှေးကောကျ ပှဲ အ သဈ ချေါယူ ဖို့ အရိပျ အမွှကျ ပွောခဲ့ ကွပွီး ဖွဈပါ တယျ။ လောလောဆယျမှာ ဂပြနျ အစိုးရအဖှဲ့ဟာ လူထု ထောကျခံမှု တှေ ရရှိနတောလညျး ဖွဈျ ပါတယျ။ ဒီအ တှကျ အတိုကျ အခံ ပါတီတှေ အား လုံး နိုငျငံ ရေး အုပျစု ကွီး တခု အဖွဈ ပူးပေါငျးလိုကျ ကွပါ တယျ ။
ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ မှာ ကငျြးပ ရနျ ရှိတဲ့ ပါလီမနျ အထူး အစညျး အဝေးမှာ ဆူဂါကို ဝနျကွီးခြုပျ အဖွဈ (၂၀၂၁) စကျတငျဘာ အထိ ထမျးဆောငျ နိုငျရနျ တငျမွှောကျ ဖို့ ရှိနေ ပါတယျ။ ဆူဂါက သူ၏ အစိုးရ အဖှဲ့အတှငျး ပွုပွငျ ပွောငျးလဲရေး သမားမြား ကိုသာ ရှေးခယျြ တာဝနျပေးသှားမှာ ဖွဈပွီး အာဏာ ရ ပါတီ အတှငျးက အုပျစုမြား ကို မကျြနှာခြို သှေးနမှော မဟုတျဘူးလို့လညျး ဆိုပါတယျ။
စီးပှား ရေး နဲ့ ပတျသကျပွီး စညျးမဉျြးမြား ဖွလြေော့ပေးသှားမှာ ဖွဈပွီး ဝနျကွီးဌာနမြား အတှငျး ဂိုဏျးဂဏ ဖှဲ့နမှေုမြား၊ ကိုယျကြိုးစီးပှား ကာကှယျ မှုမြား၊ အရငျ က လုပျခဲ့ဖူးသညျမြားကိုပဲ မကျြစိမှိတျပွီး လိုကျလုပျနမှေုမြားကို အဆုံးသတျ ပေးတော့မှာ ဖွဈတယျလို့ ပွောခဲ့ပါတယျ ။အစိုးရ လုပျငနျး မြား အားလုံးကို ဒီဂဈြတယျ ပွောငျးလဲပွီး ပွညျသူမြား အနနှေငျ့ တရကျ နှဈဆယျ့လေးနာရီ၊ တပတျ ခုနှဈရကျ ဆကျသှယျလုပျ ကိုငျနိုငျအောငျ ဖနျတီးသှားမယျလို့ ကွုံးဝါးခဲ့ပါတယျ။
ဆူဂါ သညျ အသကျ (၇၁)နှဈ ရှိပွီ ဖွဈပွီး အောကျ လှတျတျော အမတျအဖွဈ ရှဈကွိမျမွောကျ အရှေးခံထားရပွီးသူလညျး ဖွဈပါတယျ။ အာဏာ ရ ပါတီရဲ့ ပျေါလစီရေးရာ ကိုငျတှယျသူ အဖွဈ လူသိမြားသူလညျး ဖွဈပါတယျ။ အာဏာရ လဈဘရယျ ပါတီအတှငျး မညျသညျ့ အုပျစုမှာမှ မပါဝငျခဲ့သူလညျး ဖွဈပါတယျ။ကနျြးမာ ရေး၊ အလုပျသမားရေး နဲ့ လူမှုဖူ လုံရေး ဝနျကွီးဌာနတှကေို ပွနျလညျဖှဲ့စညျးသှားရနျ၊ မိုဘိုငျး ဖုနျး ဘီလျမြားကို လြော့ခနြိုငျရနျ နှငျ့ ဒသေ အလိုကျ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ ဘဏျတှကေို တစညျးတလုံးတညျးဖွဈအောငျ ပွုလုပျသှားရနျ စိတျအားထကျသနျလြှကျ ရှိတယျလို့ သိရပါ တယျ။
ဆူဂါ သညျ အစိုးရ အဖှဲ့၏ အတှငျးဝနျခြုပျလညျး ဖွဈပွီး ပွညျထဲရေး နဲ့ ဆကျသှယျရေး ဝနျကွီးလညျး ဖွဈတာကွောငျ့ သူလုပျခဲ့သမြှ မှတျတမျး တှေ အရ ဆိုရငျ ပွုပွငျ ပွောငျးလဲရေး သမား စဈစဈကွီး ဖွဈတယျဆိုတာ ထငျရှားနပေါတယျ။လောလောဆယျ ဆူဂါရဲ့ နိုငျငံခွားရေး ပျေါလစီ ကို အတိ အကြ မသိရသေးပမေယျ့ ယခငျဝနျကွီးခြုပျ ရှငျဇို အာဘေး ရဲ့ မူအတိုငျး ဆကျသှားမယျလို့ ခနျ့မှနျးရပါတယျ။ဆူဂါ သညျ မနကျ မိုးလငျး သညျနှငျ့ ထိုငျထ အကွိမျတရာ လုပျပွီး နစေ့ဉျထုတျ အထငျကရ သတငျးစာကွီးမြားကို ဖတျရှုလေ့ ရှိပါတယျ။ ပွီးတာ နဲ့ အပွငျ ထှကျပွီး မိုးရှာရှာ နပေူပူ မိနဈ လေးဆယျခနျ့ လမျးလြှောကျတတျပါတယျ။
သူ၏ အိမျ မှာ တခါ မှ ညအိပျည နေ မနခေဲ့ဖူး လို့ သိရပါတယျ။ အရကျသစော သောကျသုံးခွငျး မရှိတဲ့ ဆူဂါအဖို့ တနကေုနျ ပငျပငျပနျးပနျး လုပျပွီး ပါလီ မနျ အမတျတှေ အတှကျ ပေးထားတဲ့ အဆောငျရှိ သူ့အခနျးမှာ နောကျထပျ အကွိမျတရာ ထိုငျထ လုပျပါတယျ။ ဒါကလညျး အ ခြို အရမျးကွိုကျတဲ့လူ ဖွဈလို့ ကိုယျအလေးခြိနျ ၇၇ ကီလို အထိ ရှိလာတာကွောငျ့ ဆရာဝနျတှရေဲ့ အကွံပေးခကျြအရ လုပျတာလို့ ဆိုပါ တယျ ။စ နေ တနင်ျဂနှေ မှာ သာမနျ ပွညျသူတှနေဲ့ တှနေို့ငျသမြှ တှပွေီ့း သူတို့ ပွောတဲ့ စကားတှေ နားထောငျ ပေးလရှေိ့ပါတယျ။ ဂပြနျမှာ အခု ခတျေ စားလာတဲ့ ရထား ဘူတာရုံ ရှမှေ့ာ ပါလီမနျ အမတျတှေ လူထုကို မိနျ့ခှနျးပွောတဲ့ Soapbox speech ကို ဆူဂါက စတငျ တီထှငျပေးခဲ့တာ လညျး ဖွဈျ ပါ တယျ။
ဆူဂါ က အဲ့ဒီ အခြိနျ နိုငျငံ ရေး မှာ လကျသဈက လေးသာ ဖွဈသျောလညျး မေးခှနျးစာရှကျ ကလေးတှေ ကိုငျပွီး လူတှကေို စိတျဝငျစားမယျ့ အကွောငျး အရာတှေ ကို စာရှကျပျေါမှာ ဝိုငျးခိုငျးခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ခတျေတခတျေ စတငျ ထူထောငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။မိဘ မြား သညျ စတျောဘယျရီ စိုကျပြိုးရေး ကို ပငျပငျပနျးပနျး လုပျကိုငျနကွေရသူမြား ဖွဈပွီး အာကီတာ ဆိုတဲ့ ကြေးလကျ စီရငျစု မှာ မှေးဖှားခဲ့သူ ဖွဈျပါ တယျ။ အထကျတနျးကြောငျးကို အောငျမွငျပွီးနောကျ တိုးတကျမှုကို ရှာဖို့ တိုကြိုကို ရောကျလာခဲ့ပါတယျ။
စကျရုံ သေးသေး တဈခု မှာ နှဈနှဈျ လောကျ ဝငျလုပျခဲ့ပါတယျ။ ဘဝနာလာတဲ့ ဆူဂါသညျ ဟိုဆေး တက်ကသိုလျ ကို ဆကျလကျတကျခဲ့ပွီး ကြောငျးစရိတျ အတှကျ နဖေ့ကျ ညဖကျတှေ မှာ ရသမြှ အခြိနျလေးကို အခြိနျပိုငျး အလုပျတှေ ဝငျလုပျပွီး ကြောငျးစရိတျ ရှာခဲ့ရသူလညျး ဖွဈပါ တယျ။တက်က သိုလျ က ကြောငျးပွီး တာနဲ့ ဇာတိရပျရှာကို ပွနျလာပွီး ကုမ်ပဏီတခု မှ ဝငျလုပျခဲ့ပွနျပါတယျ။ ထိုသို့ လုပျနရေငျးက လောကကွီးကို လှုပျသှား အောငျ လုပျနိုငျတာ နိုငျငံရေး ပဲ ဆိုပွီး နိုငျငံရေး လောကထဲ ဝငျဖို့ စဉျးစားလာပါတယျ။
နိုငျငံ ရေး လောက ထဲ ဝငျဖို့ ကြောထောကျနောကျခံ ကလညျး မရှိတာမို့ အဆကျအသှယျ ရလို ရငွား သူရဲ့ တက်ကသိုလျ ရှိရာ ပွနျလာပွီး မိမိနဲ့ သငျ့တျေျာ မယျ့ အလုပျမြိုး အကွံပေးတတျတဲ့ career center ကို ရောကျလာခဲ့ပါတယျ။ စငျတာ မှာ သူအသိခငျြဆုံး မေးခှနျးကိုပဲ စမေးလိုကျ ပါတယျ။“ဒီကြောငျး က ဘှဲ့ရပွီး နိုငျငံ ရေး သမား ဖွဈျနေ တဲ့ လူ တယောကျယောကျနဲ့ ကြှနျတျောကို မိတျဆကျပေးလို့ ရမလား”စငျတာ က ဘှဲ့ရ ကြောငျးသား ဟောငျးမြား အသငျးရဲ့ အတှငျးရေးမှူး နဲ့ မိတျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ဆူဂါရဲ့ လိုလားခကျြ ပွညျ့ဝ သှားခဲ့ပါ တယျ။ အသကျ ၂၆ နှဈသာ ရှိသေးတဲ့ ဆူဂါသညျ အောကျလှတျတျော အမတျ ဟီကိုဆာဘူရို အိုကိုနိုဂြီ ရဲ့ ရုံးမှာ အတှငျးရေးမှူး အဖွဈ အလုပျလုပျ ခှငျ့ ရသှား ခဲ့ပါတယျ ။ အဲ့ဒီအခြိနျ ဟာ ၁၉၇၅ ခုနှဈ ဖွဈပါတယျ။
အသကျ (၃၈)နှဈျ မှာ ယိုကို ဟာမား မွူနီစပယျ လူကွီး အဖွဈ ဝငျရောကျ အရှေးခံ ခဲ့ပါတယျ။ ကြေးတောသား ဖွဈတဲ့ ဆူဂါ အဖို့ အောငျနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့ ခကျြ နညျးနပေမေယျ့ ယိုကိုဟာမားမှာ သူလို တောက တကျပွီး လာအလုပျလုပျ နတေဲ့ လူတှရေဲ့ ဝိုငျးဝနျးထောကျခံမှုနဲ့ အရှေးခံခဲ့ ရပါ တယျ။ယိုကို ဟာမား မွူနီစ ပယျ အမတျအဖွဈ လေးနှဈသကျတမျး နှဈကွိမျ ထမျးဆောငျခဲ့ပွီးနောကျမှာတော့ ၁၉၉၈ မှာ တိုကြိုရှိ နာဂါတာခြို ခရိုငျကနေ လဈျ ဘရယျ ဒီမိုကရကျ ပါတီ ကိုယျစားပွုပွီး အောကျလှတျတျော အမတျ အဖွဈ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျရာ မှာ အနိုငျရရှိခဲ့ပါတယျ။လကျ ရှိ အစိုး ရ အဖှဲ့ အတှငျးဝနျခြုပျ ရာထူးကို ၂၀၁၂ ကတညျးက တာဝနျယူခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
နေ အဖွဲ့အစည်းအပြင်ဘက်မှ ကမ္ဘာ များပေါ်တွင် ဂြိုလ်သား များ ရှိနေနိုင် ဟု သိပ္ပံပ ညာရှင်များ ပြော